Izaho sy ny moto eto amin'ny tanÃ na | Hevitra MPANOHARIANA |
Izaho sy ny moto eto amin'ny tanÃ na
2014-04-04 @ 06:22 in Ankapobeny
Noho ny fahateren'ny lalana eto amin'ny tanàna sy ny haratsiany manampy trotraka izany rahateo dia lasa fitaovana fifamoivoizana ahafahana mitsofotsofoka indrindra ny moto, ary manana ny lazany amin'izany ny scooter. Mora ny scooter ary azo asisika amin'ny lalana maro dia maro, eny fa na dia anelanelan'ny fiara roa heverinao tsy hahatafiditra azy mihitsy aza. Indraindray aho dia miaiky mihitsy hoe henjana ry zalahy scooter ireo raha hanao mazia fa mahatafiditra azy daholo na aiza na aiza. Mahay misompirana tsy ankihetsika ve ry zalahy sa ahoana? Nefa mety ho izaho koa no tsy sahy manao ny ataony ka ny hafa no heverina ho manao mazia. Tsy dia hiresaka scooter loatra aho noho ny antony manokana izay ho fantatrao ihany rehefa manohy ny vakinteny ianao, fa ireo moto misy vitesy no resahiko, sady tsy mbola nitondra scooter mihitsy ihany kosa aho fa efa nentina taminy indray. Maro no efa tafaresaka tamiko fa na dia mora aza ny scooter, ary ahafahana mitsofoka na aiza na aiza, dia mihinana ihany ny lasantsin-dry zalahy ireny ary arakaraka ny andehanana mafy no andaniany angovo. Fa tsy tahaka izany kosa ny moto misy vitesy, arakaraka ny andehanany mafy no mampitsitsy azy, hoy ireo zatra ireo karazana moto ireo.
Noho ny asa dia voatery mampiasa ity karazana fitaovana ifamoivoizana misy vitesy ity ny tena. Niainga tamin'ny Yamaha AG100, io karazana moto io no nianarana voalohany sy nentina voalohany. Somary avoavo fa tena tsy mataho-dalana, tsy matahotra halavirana, ary tsy mifidy toerana ihany koa. Ny ankamaroan'ireo orinasa sy sampan-draharaham-panjakana vahiny teto Madagasikara mpivezivezy mankany ambanivohitra sy ambany ravinkazo tamin'izany fotoana izany dia saiky nividy ity fitaovana ity avokoa. Hitanareo ihany moa fa misy lamaodiny ihany itony fitaovana itony. Marika Japoney, izay miavaka indrindra amin'ity resaka kodiaran-droa ity, ary sangany eo amin'ny sehatra manerantany, nanjary nankafy nitondra moto aho izay matahotra dia matahotra tamin'ny voalohany satria malaza moa ny fitenenana hoe "carrosserie tena". Tsy nitondra moto afa-tsy io aho tamin'izany fotoana izany. Nataon'ny orinasa lavanty (valopy mihidy) ho an'ny mpiasa tao aminy ireo moto rehefa niasa efa ho 15 taona. Nifandrombahan'ny maro izy tamin'izany fotoana izany, nifampiresadresaka teny sy nifanontanintany izay vidiny zakany. Tsy maintsy nifamitapitaka teny ny rehetra, mba hahazoana iray, na teo amin'ny vidiny na teo amin'ny kalitaony. Voafandrika ny tena ka tsy nahasahy avo. Rehefa nivoaka ny vokatra dia maty ampahatelon'ny nahazo azy ny tolotra nataoko, hahazoana ilay iray fitondrako. Tsy nahazo aho izany na dia iray aza.
Nividy karazany hafa indray ny orinasa hanoloana ireo namidy sy nahavita ny adidiny tamin'ny desambra 2010. Novidiana indray ny Yamaha Crux, izay mitsitsy lasantsy kokoa sy natao ho an'ny lalana an-drenivohitra. Somary ivaiva noho ny kodiaran-droa nentina teo aloha, toa maka ny endriky ny moto tranainy izany, araka ny tsilian-tsofin'ireo mpitondra tamin'ny taompolo 1960, 1970 na 1980 tany ho any. Maneno mora fa tsy nitrenatrena toy ny teo aloha. Raha mihaino tsara ianao dia toy ny fanenon'ny fiara citroën izany ny feony. Kodiaran-droa tsy mataho-dalana izany no nosoloina kodiaran-droa ho an'ny tanandehibe. Nojerena ka hita hoe tany India no nanamboarana azy, nihevitra avy hatrany hoe "sous licence" izany ity moto ity ka tsy haharitra ela raha izao fandehany izao. Rehefa nokarohina anefa ny tahirinkevitra an-tserasera dia tena vokarin'ny Yamaha mihitsy io karazana moto io fa nanangana orinasa tany India ry zareo ary mamokatra sy mivarotra ny vokatra avy ao ho an'i India sy ny firenena manodidina azy. Firenena misy mponina hatramin'ny iray miliara kosa ve, izany hoe tsena goavana ho an'izay mahazo azy, koa tsy mahagaga raha manangana sampana any sy mitady ny vokatra sahaza ireo olona ao aminy ireo orinasa goavana mitady lalam-barotra goavana.
Na izany aza dia mampatahotra ihany ity kodiaran-droa ity rehefa mandeha ambony lalantany misy fasika ka manindry ny hisatra aoriana fotsiny tampoka fa mampandihy vody mety hampianjera mihitsy izy raha tsy mitandrina, tsara kokoa raha tonga dia ny hisatra roa aloha sy aoriana avy hatrany no miara-tsindriana . Lesoka faharoa ananany ihany koa fahafatesan'ny fandrefesana lalana vita (kilometrage-mileage) ao aminy, maro an'isa kokoa ny moto maty fandrefesan-dalana vita noho ireo tsy manana izany olana izany tao amin'ny orinasa. Tsy lefitry ny lehibe mpanara-maso ny fandanian-dasantsy sy ny lalana naleha-vita izany toe-javatra izany ka efa nieritreritra ny hivarotra izany avy hatrany indray izy. Tsy tontosa izany famarotana ho an'ny mpiasa ho an'izay mahasahy lafo indrindra izany (valopy mihidy) raha tsy tamin'ny volana marsa teo. Nieritreritra avy hatrany tany anatiko tany aho fa tsy hanaiky ho voafitaka intsony fa izay vidiny eritreretiko sy izay sanda mety ho sahin'ny mahavidy azy lafo indrindra no tao an-tsaiko, tsy maintsy mba mahazo iray kosa aho, hoy aho anankampo. Nifanandrify indrindra tamin'ny tsingerintaona nahaterahako ny namoahana ny vokatra ary roa avy hatrany no azoko, ny iray fitondrako ary ny iray hafa izay anisan'ny nanaovako fiandry raha sanatria tsy azoko ilay fitondrako. Mazava loatra fa be loatra izany moto roa izany ka tsy maintsy amidiko ny iray. Tsy ho ilay mahazatra ahy velively no amidiko fa ilay iray natao fiandry ka azo. Io moto amidy io indray mba velona tsara ny fandrefesana ny lalana vita fa ilay tazoniko moa no maty fandrefesana lalam-bita voalohany indrindra tao amin'ny orinasa.
Tsy ity ilay moto amidiko aloha an!
Niova marika indray ny orinasa saingy mbola marika japoney ihany no nidirany. Nividy Honda Ace hampandehanana ny asa indray. Efa io indray koa moa no lamaody ary azo lazaina fa namelona ny tsenan'ny Honda izay saiky tsy nisy intsony teto Madagasikara. Ny sampana mpanome laharam-piara sy moto misy motera eto Antananarivo moa dia nanambara fa ny marika honda indray no tena be mpividy indrindra amin'izao fotoana izao raha ny moto no resahina. Raha mbola jerena ihany koa ny tahirinkevitra an-tserasera dia natao hoan'ny tsena Afrikanina ity moto honda ace ity ary avy ao Nigeria no mamokatra sy manaparitaka azy. Toy ny lazaiko teo aloha ihany ny "Honda Ace": tsy hoe "sous licence" izy ka orinasa hafa no mamokatra azy fa omen'ny orinasa Honda alalana hamokatra izy fa ny Honda mihitsy no nanorina asa tao Nigeria, firenena be mponina indrindra eto Afrika, ary natao hifanaraka amin'ny tsena Afrikana sy atao izay takatry ny toe-bola Afrikanina amin'ny ankapobeny ny vidiny. Efa tsy any amin'ny hoe vita avy any Eoropa na avy any Japana intsony ny eritreritry ny maro rehefa hividy vokatra tahaka itony fa ny marika sy ny fahafaha-mividy no jereny. Raha efa nanamory ny Honda Ace ny tena tao anatin'izay fotoana vitsy dia vitsy izay dia mora faneno izy, ary mitsitsy lasantsy, mora miakatra ny hafainganam-pandehany raha oharina tamin'ireo izay efa nentiko, ary toy ny maivana dia maivana izany izy rehefa entina, hatreto dia tsara ilay moto... saingy ireo zavatra lazaiko rehetra ireo dia tsy avy amin'ny manampahaizana momba ny moto velively fa ny mitondra ihany no haiko, ny ankoatra izay aza anontaniana ahy fa tsy ho haiko velively ny mamaly azy. Ny tsikaritro fotsiny dia mila ho lasa avo roa heny amin'ny vidiny avy any an-kafa any ny vidin'ireo moto ireo rehefa tonga eto amin'ny tanàna ka tsy hay intsony na ny fanjakana no maka be loatra amin'ny alalan'ny hetra na ny mpivarotra mihitsy no maka tombony be.
Jentilisa, 04-04-2014 na 04 avrily 2014